आज पनि बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर कति पुग्यो? (सूचिसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
आज पनि बढ्यो डलरको भाउ, अन्य देशका मुद्राको विनिमयदर कति पुग्यो? (सूचिसहित)
२०७६, २८ फाल्गुन बुधबार
काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । मंगलबार डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा थियो ।
याे पनि पढ्नुस यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
युरो एकको खरिददर १३४ रुपैयाँ ४२ र बिक्रीदर १३५ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पाउण्ड एकको खरिददर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्रीदर १५५ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर २८ रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ । यता, कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ भने, युएई दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस आजको विनिमय दर : कुन देशको कति ? (सूचीसहित)
तालिकामा हेर्नुहोस् विनिमयदरः
ट्याग्स: नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी मुद्रा, विनिमयदर
थप २ जनामा कोरोना देखियो